Ebu Belt Joint Vulcanizers
Fechaa Belt Joint Vulcanizers
Pkwanyere Pu Pu eriri nkwonkwo Vulcanizers
Belt Abù Mmezi
Belt Edge Mmezi
Mmezi Ngwá Ọrụ Mmezi
Sectional echebe Vulcanizing Press ZLJ ...
Edge Mmezi Vulcanizing Press maka ete ...
Rail-n'ịnyịnya Abù Repair Vulcanizing ...
Air mgbali mmiri mma vulcanizati ...
Ebu belt vulcanizing pịa maka h ...
Ebu belt vulcanizing pịa maka ikpo ọkụ
The isi akụkụ nke vulcanization nkwonkwo igwe na-mere nke elu ike aluminum alloy. Ọ kwadebere ya na akpaka mgbawa na-egosi eletriki eletriki ma nwee 0-2Mpa ọbụlagodi nrụgide nke sistemụ nrụgide nyere, yabụ a na-arụ ọrụ ọfụma, ọ ga-eburu ya. Ọ n'ozi site electric kpo oku mmewere, n'ihi ya, ọ na-arụ ọrụ stably na akwa kwes arụmọrụ na homogeneous okpomọkụ.
1. Vulcanization mgbali 1.0-2.0 MPa;
2. Vulcanization okpomọkụ 145 Celsius;
3. Dị iche na elu okpomọkụ nke vulcanized efere ± 2 ° C;
4. Oge na-ekpo ọkụ (site na ọnọdụ okpomọkụ ruo 145 Celsius C) <25 nkeji;
5. Voltaji 220V / 380V / 415V / 440V / 480V / 550V / 660V, 50 / 60HZ, usoro 3;
6. Ọnọdụ mgbanwe okpomọkụ: 0 ruo 199 Celsius C;
7. Oge nhazi oge: 0 ka nkeji 99;
Air mgbali mmiri mma vulcanization igwe
1) Ejiri ZJL igbe igbe na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na njikwa njikwa akpaka, ị nwere ike ịgbanwe na njikwa njikwa akwụkwọ ntuziaka.
2) Omuma kpo oku nke kpo oku nke kpo oku. Mgbe nrụgide ruru 2Mpa, ọ na - emepụta nrụrụ adịghị ahụ anya.
3) Durable ígwè clamping ngwaọrụ, pụrụ iche bughi imewe, mma ma a pụrụ ịdabere na.
4) Eletriki mmiri mgbapụta, ịzọpụta oge na-agbanwe agbanwe ịchịkwa vulcanizing mgbali. Ọ na-eme otu uwe ahụ maka ọrụ dị iche iche na-ebufe belting (usoro ikuku ikuku maka nhọrọ).
5) Nrụgide nrụgide nabatara akpa nrụgide roba, na-echekwa 80% ibu karịa platen ọdịnala. Akpịrị roba na-agbanwe agbanwe na-enye nrụgide edo edo na akwa arụmọrụ. Ọ gafere ule nke ịtọ ntọala 2.5 MPa wee bụrụ usoro nrụgide kachasị ewu ewu.
6) Almex ụdị blanket blanket, dum kpo oku efere mere site ike aluminum alloy. Ọkpụrụkpụ bụ naanị 25 mm, iji belata ibu ma chekwaa ike. Ọ chọrọ naanị ihe dị ka nkeji iri abụọ iji si na ụlọ dị elu ruo 145 Celsius.
7) Mee ka mmiri jụrụ oyi sistemụ, site na 145 ℃ ruo 70 ℃ chọrọ naanị 15-20 nkeji.
Mpaghara echebe Vulcanizing Press ZLJ Series Arọ-oru Type
New ụdị Vulcanizing Press, otu ụdị dị arọ ibu vulcanizer, jiri ọhụrụ imewe mmiri, gụnyere mgbali akpa, traverse Ogwe na ọkọlọtọ kpo oku platen na akara igbe.